क्रिकेट यू‍- १९ एसिया कप ! » Nepal Ireland News
क्रिकेट यू‍- १९ एसिया कप !
कार्तिक २७, २०७४-एसीसी यू‍- १९ एसिया कपमा आइतबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा मलेसियालाई पराजित गरे पनि नेपालको सेमिफाइनल स्थान पक्का नहुन सक्छ । नेपाली टोलीले यो राम्रोसँग बुझेको छ । पहिलोपल्ट सेमिफाइनल लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालका लागि समीकरण सहज छैन ।
नेपालले शनिबार भारतलाई १९ रनले पराजित गरी सेमिफाइनल पुग्ने आशा ब्युँत्याएको थियो । तर बंगलादेशले आइतबार मलेसियालाई समूहको अन्तिम खेलमा २ सय ६२ रनले पराजित गरेपछि नकआउट चरणको यात्रा नेपालका लागि कठिन बनेको हो ।
नेपाली टोलीका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी टोलीले दोस्रो चरणमा पुग्न सक्दो मिहिनेत गर्ने बताउँछन् । ‘हामीले मलेसियालाई ठूलो अन्तरले पराजित गर्नुपर्छ । टोली त्यसका लागि सक्षम छ । भारतविरुद्धको जितले हाम्रो मनोबल उच्च भएको छ । अर्को खेलको नतिजाले पनि हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ । तर हामी आफ्नो तर्फबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यसाथ उत्रन्छौं,’ उनले भने । भारतविरुद्ध ८८ रन बनाएका उनले समयसँगै ब्याटिङ सुदृढ हुँदै गएको बताए ।
‘विश्वकप छनोटमा ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन । इस्टर्न रिजनमा पनि सोचेअनुरुप प्रदर्शन भएन । यस प्रतियोगितामा टेस्ट खेल्ने राष्ट्रविरुद्धको प्रदर्शनले मनोबल उच्च बनाएको छ । भारतविरुद्ध सुरुआतमा विकेट बचाउने र पछि आक्रामक हुने योजना थियो । त्यसमा सफल भयौं,’ उनले थपे ।
मिडियम पेसबाट स्पिन बलिङ गर्न थालेका उनले भारतको ४ ब्याट्सम्यानलाई पेभेलियन फर्काएका थिए । टोलीमा शाहब आलम, पवन सर्राफ र सन्दीप लामिछाने जस्ता स्पिन बलर हुँदाहुँदै पनि दीपेन्द्रले दबाबको स्थितिमा राम्रो बलिङ गरे । आफैं स्पिन बलिङमा आउनुको कारण दिँदै उनले भने, ‘म आफैं बलिङ गर्न सक्छु भन्नेमा विश्वस्त थिएँ । यसअघि पनि यहाँ बलिङ गर्दा राम्रो प्रदर्शन भएको थियो । योजना अनुसार खेल बढेकाले त्यसैअनुसार बलिङ गर्दा विकेट प्राप्त भयो ।’
प्रशिक्षक विनोद दासले मलेसियाविरुद्धको खेल नेपालका लागि क्वालिफायर रहेको बताए । ‘सेमिफाइनल पुग्न हामीले राम्रो जित हात पार्नु जरुरी छ । पहिलो इनिङस समाप्तिपछि हामीले पूर्ण समीकरण बुझ्छौं । भारत र बंगलादेशको नतिजा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तर हामी आफ्नो स्थानबाट सक्दो प्रयास जारी राख्नेछौं,’ उनले भने । भारतविरुद्धको जितले वर्तमान स्थितिमा केही फरक नपर्ने हुनाले टोलीले अगाडि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
‘भारतविरुद्ध राम्रो जित थियो । त्यसबाट सिकेर हामी अझै अगाडि बढ्नुपर्छ । समूह चरणलाई राम्रो अन्त्य दिनु एकदम जरुरी छ । हामीले आफूलाई बलियो राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न दोस्रो चरणको दाबेदारी प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ,’ दासले थपे । भारतविरुद्धको उत्रिएको टोलीमा परिवर्तनबारे उनले खेलअघि पिच अवस्था हेरेर मात्र निर्णय लिने बताए ।
कसरी पुग्छ सेमिफाइनल?
समूह ‘ए’ को अंकतालिकामा बंगलादेश २ खेलमा ४ अंक जोडै शीर्षस्थानमा छ । नेपाल र भारतको समान २ अंक भए पनि रन रेटका आधारमा भारत दोस्रोमा छ । शीर्षस्थानको बंगलादेशको रनरेट २.९३३ छ भने भारतको १.८३ र नेपालको ०.१९३ छ । नेपाललाई दोस्रो चरण पुग्ने सम्भावना जीवित राख्न मलेसियाविरुद्ध जितको विकल्प छैन । नेपालको जितसँगै बंगलादेशले भारतलाई पराजित गरेमा नेपाल दोस्रो चरण पुग्नेछ । भारत र बंगलादेशको खेलमा भारतीय टोलीले धेरै वा निकै कम अन्तरको जित हात पारे पनि नेपालको सम्भावना बलियो हुनेछ ।
बंगलादेश र पाकिस्तानको जित
समूह ‘ए’ को खेलमा बंगलादेशले मलेसियालाई २ सय ६२ रनले पराजित गर्‍यो । तावहिद दोयको १ सय २० रन र कप्तान सेफ हसनको ९० रन मदतले बंगलादेशले निर्धारित ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै ३ सय ३५ रन जोड्यो । जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको मलेसियाले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै ७३ रन बनायो । उसका लागि कप्तान वीरनदीप सिंहले १ सय ३० बलमा ४६ रन जोडे ।
समूह ‘बी’ मा पाकिस्तानले श्रीलंकालाई ३ विकेटले हराउँदै दोस्रो चरणमा स्थान पक्का गर्‍यो । पहिलो खेलमा अफगानिस्तानसँग ५७ रनमा अलआउट भएको पाकिस्तानले लगातार दुई खेल जित्दै दोस्रो चरणमा स्थान पक्का गरेको हो । सोमबार श्रीलंकाले प्रस्तुत गरेको १ सय ४२ रनको लक्ष्य पाकिस्तानले ७ विकेट गुमाई ३३ औं ओभरमा पूरा गर्‍यो । त्यसअघि श्रीलंकाले ४९.४ ओभरमा अलआउट हुनुअघि १ सय ४१ रन बनाएको थियो ।
समूह ‘बी’ अन्तिम खेलमा मंगलबार यूएई र अफगानिस्तान भिडै छन् । अफगानिस्तान जित हात पारे दोस्रो चरण पुग्नेछ र श्रीलंका प्रतियोगिताबाट बाहिरिने छ ।